हुबेईमा रहेका नेपाली भन्छन -‘ट्वाइलेटको पानी उमालेर खाइरहेका छौं, सरकार हामीलाई लिन कहिले आउँछौ ?’हामी उम्किन चाहान्छु!::Point Nepal
हुबेईमा रहेका नेपाली भन्छन -‘ट्वाइलेटको पानी उमालेर खाइरहेका छौं, सरकार हामीलाई लिन कहिले आउँछौ ?’हामी उम्किन चाहान्छु!
करोड ६० लाख मानिस बस्छन्। यी सबै जना अहिले घरको कोठाभित्र थु’निएका छन्। बाहिर गए सं’क्रमण फै’लिने ड’रले चीनले हुवेई प्रान्तलाई नै ‘ल’कडाउन’ गरिदिएको छ। बाहिर निस्किन नपाए पनि चिनियाँहरू त आफ्नो देशमा जसोतसो बसिरहेका छन् तर पढ्न र कामको शिलशिलामा वुहान पुगेका नेपालीलाई कोठाको बसाइँ जे’लजस्तो भइरहेको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ बस्ने मन छैन तर चाहेर पनि बाहिर निस्कन सक्दैनन्। सरकारले नल्याएसम्म उनीहरू आफ्नै देश पनि फर्किन पाउँदैनन्।
अचेल वुहानमा बस्ने झन्डै १ सय ८० जना नेपाली आफूहरूलाई लिन जहाज कहिले आउला भन्दै कुरेर बसेका छन्। नेपाल फर्किन चाहनेले अनलाइनमा फाराम भर्नु भनेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जहाज कहिले आउँछ केही जानकारी दिएको छैन। तीन साता बित्न लाग्दा कोठाभित्र थु’निएका नेपालीको कति दिन यहाँ बस्नुपर्ने होला भनेर मा’नसिक त’नाव बढ्न थालेको छ भने कोठाभित्रको खानेकुरा र अन्य चाहिने सामग्री सकिँदैछ। ‘पानी सकिएको त चार दिन भइसक्यो। एम्बेसीले अनलाइनमा अर्डर गर्नु भनेको थियो। आउन चार-पाँच दिन लाग्छ रे,’ वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थी अशोक साहले भने,‘अचेल म ट्वाइलेटबाट पानी ल्याएर दुई पटक उमाल्छु।
अनि त्यही पिउँछु।’ तीन साता बित्दा पनि सरकार आफूहरूलाई लिन नआएपछि आश म’रेको साहले बताए। ‘हाम्रो सरकारले जहाज पठाउलाजस्तो छैन। हामी त बरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गु’हार्ने कुरा गर्दैछौं,’ साहले भने। अधिकारीहरू नेपाली फि’र्ता ल्याउनेबारे तयारी भइरहेको बताउँछन् तर ठ्याक्कै जहाज कहिले जान्छ भन्न सक्दैनन्। माघ २३ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयको बैठकमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साताभित्र चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सरकारले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा चीनबाट ल्याउनेलाई राख्न क्वा’रेन्टाइन बनाइरहेको छ। ‘अस्तिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक साताको समय दिनु भएको हो। अब एक-दुई दिनमा जहाज जान्छ होला,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने,‘तर ठ्याक्कै कुन दिन जान्छ भन्ने मलाई जानकारी छैन।’ नेपाल एयरलाइन्सले उद्धारमा निगमको वाइडबडी जहाज जाने नि’श्चित भए पनि मिति टुं’गो नलागेको बताएको छ। फेब्रुअरी १५ मा जहाज पठाउनेबारे छलफल भए पनि नि’श्चित नभएको नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्।